Carl Henry Global - GDPR Eziokwu Nzuzo na Kuki Jiri (enweghị isi)
Anyị na-anakọta ozi n'aka gị mgbe ị debanyere aha na saịtị anyị, debe iwu, denye aha na akwụkwọ akụkọ anyị, mejupụta ụdị ma ọ bụ Tinye ihe n'ime ụlọ ahịa gị.
Mgbe ịtụ ma ọ bụ na ịdenye na anyị na saịtị, dị ka o kwesịrị ekwesị, nwere ike ịjụ gị ịbanye gị: aha, e-mail address, adreesị nzipu ozi ma ọ bụ nọmba ekwentị. Ị nwere ike, Otú ọ dị, gaa na anyị na saịtị anonymously.
Google, dị ka onye na-ere ahịa nke atọ, na-eji kuki iji mee mgbasa ozi na saịtị gị. Iji Google kuki kuki DART enyere ya aka iji mgbasa ozi nye ndị ọrụ gị dabere na nleta ha na saịtị na saịtị ndị ọzọ na Ịntanetị. Ndị ọrụ nwere ike ịpụ na ntanetị DART site na ịga na mgbasa ozi nzuzo nke netwọk mgbasa ozi Google.
Iji hazie ahụmahụ gị - (ozi gị na-enyere anyị aka imeziwanye mkpa gị)
Iji melite ebe nrụọrụ weebụ anyị - anyị na-agbalịsi ike imeziwanye ebe nrụọrụ weebụ anyị na-adabere na ozi na nzaghachi anyị na-enweta n'aka gị
Iji melite ọrụ ahịa - ozi gị na-enyere anyị aka imeghachi omume n'ụzọ dị irè na arịrịọ ndị ahịa gị na nkwado gị
Iji hazie azụmahịa - Ozi gị, ma ọ bụ n'ihu ọha ma ọ bụ nkeonwe, agaghị ere, gbanwere, wefee, ma ọ bụ nye ụlọ ọrụ ọ bụla maka ihe kpatara ya, na-enweghị nkwenye gị, ma ọ bụghị maka ebumnuche doro anya maka ịnye ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ achọrọ.
Iji chịkwaa onyinye anyị - asọmpi, nkwalite, nnyocha ma ọ bụ njirimara saịtị ọzọ
Iji zipụ ozi ịntanetị oge - Adreesị ozi-e ị na-enye maka nhazi usoro, nwere ike iji mee ka ị nweta ozi na mmelite gbasara iwu gị, na mgbakwunye na ịnweta ozi ụlọ ọrụ oge ụfọdụ, mmelite, ngwaahịa yiri ma ọ bụ ozi ọrụ, wdg.
Cheta na: Ọ bụrụ na mgbe ọ bụla ị ga-achọ wepu aha na-anata n'ọdịnihu ozi ịntanetị, anyị na-agụnye akowaputara wepu aha na ntụziaka na ala nke ọ bụla email.
Anyị mejuputara ọtụtụ nchebe iji jide nchekwa nke ozi nkeonwe gị mgbe ị na-etinye iwu ma ọ bụ tinye, nyefee, ma ọ bụ nweta ozi nkeonwe gị.
Mgbe azụmahịa, ozi nzuzo gị (kaadị akwụmụgwọ, nọmba nchekwa mmadụ, ego, wdg) agaghị echekwa na sava anyị.
Ee, Kuki bụ obere faịlụ na saịtị ma ọ bụ ndị na-ahụ maka ọrụ na-enyefe kọmputa gị ike kpochapụ site na ihe nchọgharị weebụ gị (ma ọ bụrụ na ikwe ka) nke na-enyere saịtị ma ọ bụ ndị ọrụ na-enye ọrụ aka ịchọpụta ihe nchọgharị gị ma jide ma cheta ụfọdụ ozi.
Ọ bụrụ na ịchọrọ, ịnwere ike ịhọrọ ka kọmputa gị dọọ aka aka ná ntị oge ọ bụla a na-eziga kuki, ma ọ bụ ị nwere ike ịhọrọ gbanyụọ kuki niile site na ntọala ihe nchọgharị gị. Dị ka ọtụtụ weebụsaịtị, ọ bụrụ na ịgbanye kuki gị, ụfọdụ ọrụ anyị nwere ike ọ gaghị arụ ọrụ nke ọma. Otú ọ dị, ịnwere ike ịnye iwu site na ịkpọtụrụ ọrụ ndị ahịa.
Maka na anyị ji ihe nzuzo gị kpọrọ ihe, anyị ewerewo nlezianya dị mkpa iji kwenye na Iwu Nchedo Nzuzo California. Ya mere, anyị agaghị ekesa ozi nkeonwe gị n'èzí na-enweghị nkwenye gị.
Dịka akụkụ nke Iwu Nchedo Nzuzo California, ndị ọrụ niile nke saịtị anyị nwere ike ime mgbanwe ọ bụla na ozi ha n'oge ọ bụla site n'ịbanye n'ime ogwe aka ha ma na-aga na ibe 'Dezie profaịlụ'.
Childrens Online Nzuzo Protection Act n'ikedo
Anyị na-agbaso ihe ndị COPPA (Iwu Nchedo Nchedo Ntanetị) chọrọ, anyị anaghị anakọta ozi ọ bụla site n'aka onye ọ bụla nọ n'okpuru afọ 13. A na-agwa anyị na ebe nrụọrụ weebụ anyị, ngwaahịa na ọrụ ndị mmadụ dịkarịa ala 13 afọ ma ọ bụ karịa.
Nke a online iwu nzuzo na-emetụta nanị ozi anakọtara site na anyị website na ghara ozi anakọtara offline.
Biko nakwa gara anyị Usoro na ọnọdụ ngalaba guzosie ike ojiji, disclaimers, na-agaghị emeli nke ibu-achịkwa ojiji nke anyị website na http://www.carlhenryglobal.com/terms-and-conditions
A gbanwere iwu a na 25 / 03 / 2018